ပိတ်ဆို့ မူ့ တွေ လျော့ချ တယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချူပ် ရဲ့ ပြောဆိုချက် (ရုပ်/သံ)
သမ္မတဦးသိန်းစိန် နှင့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်းမရွန်း နေပြည်တော်မှာတွေ့ ဆုံ (ရုပ်/သံ)
ရန်ကုန်-ဒလ ကူးတို့သင်္ဘော ၀န်ထမ်းများ ပြေစာလွတ် တန်ဆာခ မတရားကောက်ခံနေ
မန်းသင်္ကြန် အကြိုနေ့ 
Posted: 13 Apr 2012 05:02 AM PDT
Posted: 13 Apr 2012 04:17 AM PDT
"မြန်မာပြည်မှာ အပြောင်းအလဲတွေအပေါ်မှာ သတိထားဖို့၊ မေးခွန်းတွေ ဆက်ထုတ်နေဖို့ လိုအပ်သလိုပဲ အခုလို အလင်းရောင်တွေ မြင်နေရပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေ ပွင့်လင်းလာဖို့ မျှော်လင့်ရတဲ့ အပြောင်းအလဲ စတင်နေတဲ့အခြေအနေမှာ နောက်ကနေ အားပေးဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။"
"မြန်မြန်ဆန်ဆန် အီးယူတို့ဘာတို့က လျှော့လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးက မဖြစ်သင့်သေးဘူး။ အချိန်စောသေးတယ်။ တိုးတက်မှုကို ဆက်ကြည့်ဦးပေါ့။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရွေးခံရတာနဲ့တင် မဟုတ်သေးဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာက သမ္မတကြီးနဲ့လုပ်ရတာ ကောင်းတယ်။ အခုက အစိုးရအဖွဲ့အစည်းထဲ ရောက်သွားပြီ၊ လွှတ်တော်ထဲရောက်သွားပြီ၊ နောက် ဘယ်လိုအခြေအနေ ရှိမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည်ရဦးမှာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ခုအချိန်အခါ လုပ်ဖို့ကိုင်ဖို့ဆိုတာတော့ သူတို့ဘက်က ပေးတဲ့အတိုင်းအတာတွေကတော့ တိုးတက်မှုရှိတာတော့ အမှန်ပဲ။ အရင်နဲ့စာရင် တိုးတက်တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာသာ စဉ်းစားရင် စဉ်းစားပေါ့။ သို့သော်လည်း စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပတ်သက်တာအားလုံးကို အလျင်စလို လျှော့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ဘက်က အများကြီး ချိန်ဖို့ကောင်းသေးတယ်။ အရမ်းကြီးလုပ်ဖို့ မသင့်သေးဘူး။"
အီးယူဟာ ဖေဖော်ဝါရီလကတုန်းကတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် အစိုးရအရာရှိ ၈၇ ဦးရဲ့ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာတွေကို ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီး လက်နက်မတင်ပို့ရေး၊ ကျောက်မျက်နဲ့ လူပေါင်း ၅၀၀ နီးပါးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ချိပ်ပိတ်ထားတာကတော့ ဆက်ရှိနေပါတယ်။
Posted: 13 Apr 2012 04:48 AM PDT
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လာမည့် ဇွန်လတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Live coverage of their meeting.
Posted: 13 Apr 2012 04:07 AM PDT
လမ်းဘေးဈေးသည်များစွာက လမ်းတလျှောက် အပြည့်စီတန်းနေရာယူထားသည်။ ထမင်းချက် သံယောင်းမမှ ထိုင်းရိုးရာအ၀တ်အစားအထိ အမျိုးစုံအောင် ရောင်းနေကြသည်။ သူတို့ မျက်စိက ကျမနှင့် ကျမရဲ့ သမီး 'ကီယာစတင်' တို့ထံ ၀ယ်များဝယ်ယူမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ကြည့်နေကြသည်။ ကျမတို့ သားအမိက အနောက်တိုင်း ၀တ်စားပုံနှင့်။ ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ တေးသွားအသံက ကျမတို့ကို မစွဲဆောင်နိုင်သေး။ သို့သော် နားထဲမှာတော့ တ၀ီဝီနှင့် အဆန်းသား။
"မေမေ လာ" ကီယာစတင်က ကျမလက်ကိုဆွဲရင်း အနံမျိုးစုံမွှေးကြိုင်နေသည့် စားစရာဆိုင်နား အတင်းခေါ်သွားသည်။ ကာလာအရောင်မျိုးစုံမုန့်တွေကို သေသေသပ်သပ် ခင်းပြထားသည်။ မီးကင်ထားသော အသားများမှလွဲလို့ အားလုံးက စားချင်ဖွယ်ရာတွေ။
"မေမေ တစ်ခုခု စားပါလား" သမီးက အတင်းတိုက်တွန်းနေသည်။ ဘေးဆိုင်က ပိုးကောင်မွှားကောင် ကြော်ထားတာတွေကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်း "မစားချင်သေးပါဘူးကွာ၊ ဟိုမှာကြည့်စမ်း ပိုးကောင်လေးတွေရဲ့ ခြေထောက်စားဖို့ကို မေမေ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို့မရဘူး"
ဈေးထဲမှာ ရွှေရောင်ဆံပင်နှင့် အပြင်ကလူဆိုလို့ ကျမတို့ သားအမိက ထင်းထင်းကြီး ဖြစ်နေသည်။ သို့သော် ထိုင်းလူမျိုးတွေက ဖော်ရွေကြင်နာသည်။ ရွှေလည်ဆွဲကလေးတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှေ့ ကျမတို့ ရပ်လိုက်သည်။ ကီယာစတင်က ဈေးမေးကြည့်ရင်း "ဈေးသက်သာ လိုက်တာ" တဲ့။ အမေရိကန် ဒေါ်လာက ထိုင်းတွင် မာနေချိန် မဟုတ်လား။ ကျမတို့ လိုချင်တာလေးတွေ ၀ယ်ဖို့ လက်လှမ်းမှီနိုင်သည်။ ထိုင်းရဲ့ စီးပွားရေး အလွှာစုံအခြေအနေကို ဒီညဈေးလေးတွင် မြင်နိုင်သည်။
သိပ်မကြာလို်က်၊ ကျမသူငယ်ချင်း နန်စီနှင့် ဈေးထဲမှာ ဆုံမိသည်။ "ထိုင်းတွေက ကလေးချစ်တတ်တယ်နော်" ဟု အမှတ်မထင် သူ့ကိုပြောလိုက်မိသည်။
"အေးဟ ထိုင်းတွေက သူတို့ကလေးတွေတင်မက အခြားကလေးတွေလည်း ချစ်တတ်တယ်။ ကလေးတွေကို ဒီမှာ ရတနာတွေလို တန်ဖိုးထားတတ်တယ်နော်" နန်စီကလည်း ပြန်မှတ်ချက်ပေးသည်။
နန်စီ အမြင်ကို ကျမခေါင်းငြိမ့်လိုက်သည်။ နန်စီက သူ့ယောင်္ကျား၊ ကလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူ ထိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အခြေကျ နေထိုင်နေတဲ့သူ။ ဒါပေမဲ့ ကျမ ခေါင်းထဲ ရှုပ်ထွေး နေသေးသည်။ ကလေးတွေကို ဒီလောက် ချစ်ခင်ယုယမြတ်နိုးတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် ကလေးပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ပေါများနေရတာလဲ။ ကျမရဲ့ ဝေခွဲမရမှုကို နန်စီ ဆက်မေးကြည့်တော့ "အင်း" ဟု တစ်ချက်ထဲပြောရင်း ရှေ့ဆက်တိုးပြီး အခြားလမ်းဘက် ကူးဖို့ လုပ်နေသည်။
"သူတို့က အခါ လူမျိုးစုတွေလေ" လို့ နန်စီက ပြောပြသည်။
ထိုင်းလူမျိုးတွေကလည်း သူတို့ကို လက်မခံ။ လူဦးရေ ၅၄၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည့် လူမျိုးစုတွေမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု မခံကြရ။ ကိုယ်ပိုင် မွေးစာရင်း အသေအချာမရှိ။ ထိုင်းခေတ်မှီ ဆေးရုံမှာ တက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အဝေးကြီး။ ဒီလို တရားဝင် နိုင်ငံသား အဆင့်အတန်း ငြင်းပယ်ခံရမှုကြောင့် ပညာသင်ကြားမှု၊ မဲပေးပိုင်ခွင့်၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့် စတဲ့ ကျေးရွာရဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးထားကြရသူများပင်။
ပြီးတော့ မော်ဒန်နိုက်ဇေးရှင်းရဲ့ ဖိအားတွေက အခါလူမျိုးစုတွေကို ဒုက္ခအဖုံဖုံ ထပ်တွန်းအား ပေးလာသည်။ တစ်နေ့တခြား ဆင်းရဲမွဲတေမှု မြင့်မားလာမှုကြောင့် ကျေးရွာများတွင် မိမိရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို ထိန်းထားဖို့ ခက်လာသည်။ ပညာတတ်အနည်းဆုံးနှင့် အဆင်းရဲဆုံး လူမျိုးစုဖြစ်သည့် အခါတွေမှာ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှုများလာပြီး၊ ထို်င်းနိုင်ငံတွင် အရွယ်မတိုင်မီ ကလေးသေဆုံးမှုနှုန်း အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ဘိန်းစွဲမှုနှင့် ကလေးပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းမှာ တောင်တန်းဒေသ လူမျိုးစုများအတွက် အကြီးမားဆုံး ပြဿနာ ဖြစ်နေသည်။
ကျမ ထိုင်းကို ထွက်မလာခင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးသေးသည်။ "နင့်က ဒီအကြောင်း ဘာလို့ ရေးချင်ရတာလဲ"
ကျမအဖြေက ယုတ္တိကျချင်မှ ကျမည်။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို မီဒီယာတွေကနေ ဖော်ထုတ်တာနဲ့အမျှ လူမှု့ပြဿနာဆိုးတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ကျမယုံကြည်ချက်ကြောင့် ထွက်လာရသည်။ ကျမ တကိုယ်ထဲအမြင်ပြောရရင် လူသားထုကောင်းကျိုးအတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တွေ အလင်းရောင်တွေ ကျမတို့ ရှာဖွေကြရမည်။
"မေမေ သမီး ဒါဝယ်လို့ ရမလား"
အခါလူမျိုး ၀တ်စုံသေးသေးလေး ၀တ်ပေးထားတဲ့ အရုပ်ကလေးကို ကိုင်ထားရင်း သမီးက မေးသည်။ "ယူလိုက်ပေါ့၊ သိပ်တော့ မခိုင်ဘူးနော် သေချာကိုင် အောက်မကျစေနဲ့"
သမီးအထက်က အကြီးနှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ပြီး ကီယာစတင်ကို ကျမနား ခေါ်လာခဲ့သည်။ ကျမ တစ်ယောက်ထဲ ခရီးထွက်ရမှာ ငြီးငွေ့လို့။ ထိုင်းနိုင်ငံက ကလေးအတွက် စိတ်ချရတယ်လို့ ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။ နန်စီကတော့ ဘာကြောင့် မိသားစုလိုက် မလာကြတာလဲလို့ မေးသည်။ လေယဉ်စရိတ်က ကြီးတယ်လေ နန်စီရယ် သိပြီးသားမဟုတ်လား။
လိင်ကုန်ကူးမှုအကြောင်း သမီးကို ရှင်းပြတော့ ကီယာစတင်က ပြန်မေးသည်။ "သူတို့ ခံနိုင်ရည် ရှိပါ့မလား၊ တတ်နိုင်ပါ့မလား မေမေ၊ သူတို့က သမီးလို ကလေးတွေပဲဟာ"
သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို လိင်ကျွန်အဖြစ် လိုလိုလားလား ရောင်းစားနေသည့် မိဘတွေ၊ ဦးလေးတွေ၊ အဒေါ်တွေ ရှိနေတာကို ကျမ ဘယ်လို ရှင်းပြရပါ့မလဲ။ မိဘမရှိ ထောက်ပံ့မယ့်သူမရှိတဲ့ ကလေးအချို့ကတော့ သူတို့ ဗိုက်ဖြည့်ဖို့ လမ်းပေါ်ထွက်လာရင်း ဒုက္ခတွေ့ကြရတဲ့အကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးအတွက် ငွေလိုလို့ လှလှပပ ၀တ်ချင်စားချင်လို့ ကိုယ်ဘာသာ ပြည့်တန်ဆာ ပြုလိုက်ကြတဲ့ အရွယ်ရောက်စတွေအကြောင်း သမီး တခါထဲ နားလည်အောင် ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ။
ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် လူသား ဗီဇမှာပါလာတဲ့ အပြုအမူအချို့မှာ အရင်းခံနေတဲ့ ကလေးပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းက ကျော်လွှားဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ ပြဿနာကြီးပဲ။ ဒါကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲ။ နန်စီနှင့် ကျမ အချိန်ကြာကြာ စကားပြောဖြစ်သည်။ နန်စီက ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လုံး ကလေးပြည့်တန်ဆာ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ခဲ့သူ။ ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်မလာခင်က ခရစ်ယန် လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာ အချိန်ကြာကြာ လုပ်ခဲ့ဖူးသူ။
"ကျမ ဘန်ကောက်ကို စမြင်တော့ ဒီညစ်ပတ်တဲ့ မြို့ကြီးကို မနှစ်မြို့ဘူး။ နောက်တော့ ထိုင်းမြောက်ဖက်ပိုင်း တောင်ပေါ်မြို့လေးကို ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ မိန်းကလေးတွေအတွက် အိမ်သစ်တစ်လုံး ဆောက်ပြီး ဦးဆေင်လမ်းညွှန်ပေးရတယ်" နန်စီက ပြောပြသည်။
"ပထမဆုံးအကြိမ် ကလေးပြည့်တန်ဆာ အစီရင်ခံ ရီပို့တ်တွေ ဖတ်ရတော့ ကျမ အိပ်ယာထဲသွားပြီး တစ်နာရီလောက် မျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ မပြောနဲ့။ ဒီလို စိတ်ဖိစီးမှုမျိုး အရင်က မခံစားရဖူးဘူး။ ကျမ ဘာလုပ်ရမှန်းလဲ မသိဘူး။ ပြဿနာက အကြီးကြီးမို့ ကြောက်စရာကြီး။ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေလာခဲ့ရတော့ ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒါမျိုး ဒုက္ခရောက်တာ မရှိဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းတွေနဲ့ အကြံပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်"
"အရင်က ထိုင်းစကားတောင် ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျမ ဘာစလုပ်ရမှာလဲ။ သူတို့ ဘာသာစကား နားလည်ဖို့ ကျမအတွက် အတော်ခက်တာ။ ကျမ ဆက်ကြိုးစားတယ်။ အဘိဓာန်တွေလှန် ရုပ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ကလေးမတွေ ပြောချင်တာ၊ သူတို့ ရန်ဖြစ်နေတာကို သိအောင် လုပ်ရတယ်။ နောက်တော့ မဖြစ်မနေ တတ်လာတာပေါ့"
နန်စီက ဆက်ပြောသည်။ "တစ်နှစ်အတွင်းမှာ မိန်းကလေးတွေကို ထိုင်းစကားနဲ့ ကျမ ချော့တတ် အားပေးနှစ်သိမ့်တတ်လာတယ်။ သူတို့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ လမ်းသစ်ကိုညွှန်ပြဖို့ ကျမ ကူညီပေးနိုင်လာတယ်။ အဓိကဟာကတော့ သူတို့ကို ဂရုစိုက်တဲ့ တစုံတဦး ရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ သိဖို့ပဲမဟုတ်လား"
နန်စီက ကျေးရွာ ပရော့ဂျက်တစ်ခုလုပ်နေရင်း 'အေဂျီ' လို့ခေါ်တဲ့ ခပ်ချောချော အခါ လူငယ်နဲ့တွေ့ခဲ့သည်။ နောက်တော့ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
"အခါလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ အေဂျီကို ကျမတွေ့ရတော့ အတော် စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ သူသာ အနောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ရင် တစ်မိနစ်အတွင်း ကျမ လက်ထပ်မိလိုက်မှာ။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ အချိန်ယူပြီး မိတ်ဆွေ အဖြစ်ကနေ ချစ်သူဘ၀၊ နောက် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ ဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ အရင်က ကျမအဖို့ တောင်ပေါ်သား လူမျိုးစုထဲက တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ယူဖို့ဆိုတာ ဘယ်လို တွေးကြည့်ဖြစ်မှာလဲ" လို့ ပြောနေစဉ် နန်စီ မျက်နှာမှာ အပြုံးတွေနှင့်။
"တစ်နေ့ အေဂျီ က ပြောတယ်။ သူဟာ နိမ့်ကျတဲ့ လူမျိုးစုက လာတာ။ သူမှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရယ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ်ရယ်၊ ဘုရားသခင်အတွက် နှလုံးသားရယ်ကလွဲလို့ ဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှ မရှိဘူးတဲ့။ အမေရိကမှာ သူ ပညာဆက်သင်ချင်ပေမယ့်၊ သူ့လူထုကို ဒီအတိုင်း ပစ်မထားရက်ဘူးလို့ ပြောလာတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ကျမသူ့ကို လက်ထပ်ရင် ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ကျမတိုင်းပြည်ကို စွန့်ခဲ့ရမယ်ပေါ့။"
"အေဂျီ အဖေက ကျေးရွာရဲ့ လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ မင်္ဂလာပွဲကို တရွာလုံး လာကြတာပဲ။ အခါလူမျိုး ထုံးစံအတိုင်း ဇနီးမယား တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကျမ သက်သေပြခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။ မင်္ဂလာပွဲမှာ သစ်ပင် ခုတ်ပြရတယ်၊ ကြက်တွေ အစာကျွေးပြရတယ်"
ကျမတို့ ဈေးဝယ်ပြီးသွားတော့ နန်စီက သမီး ကီယာစတင်နှင့် ကျမကို အခြားလမ်းတစ်ဖက်ဆီ ဆွဲခေါ်သွားပြန်သည်။ မှောင်မှောင်မည်းမည်း အရိပ်သဏ္ဍန်တွေပဲ မြင်ရတဲ့ လမ်းကလေး။ အမေရိကမှာတော့ ဒီလို လမ်းကြားမျိုး ရောက်သွားသည်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကမရှိ။ အန္တရာယ်နံက သင်းနေမည်။ သမီးအတွက် ထိတ်ကနဲ စိုးရိမ်သွားမိသည်။
ရှေ့မှာ ဒစ္စကို မီးသီးလို လည်နေသော မီးစလိုက်ကို တွေ့ရသည်။ ဘားဆိုင်တွေပဲ ဖြစ်မည်။ "အိုကေ ပါ့မလား" ဟု နန်စီကို မေးလိုက်သည်။ ကျမတို့ နောက်နား ခပ်ခွါခွါမှ လူငယ်သုံးယောက် လမ်းလျှောက်လိုက်လာနေသည်။ ကျမတို့ကို တစုံတရာ အန္တရာယ်ပေးရင်တော့ ကျမတို့ ဘာမှ တတ်နိုင်မည် မဟုတ်။ ကီယစတင်ကို အနားနား ပိုကပ်ထားလိုက်သည်။ အို ဒါ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းပဲ။ နန်စီက လုံခြုံစိတ်ချရလို့ ဒီခေါ်လာတာပဲ။
ဘားဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့တွင် နန်စီကရပ်လိုက်လို့ ကျမ ကြည့်လိုက်တော့ ၁၅၊ ၁၆ နှစ် မိန်းမပျိုလေးတွေ။ တချို့လည်း ၂၀ လောက်ရှိမလား မဆိုတတ်ဘူး။ ဘားဆိုင် အပြင်ဖက်တွင် စုရုံးစုရုံး လုပ်နေကြသည်။ ဂျင်းတွေ တီရှပ်တွေ ၀တ်ထားကြသည်။ စကတ်တိုတို ၀တ်သူကလည်း ၀တ်။ အားလုံး ဆယ်ကျော်သက်တွေ။
"သူတို့ ပြည့်တန်ဆာမလေးတွေလေ" နန်စီ အသံက စို့နင့်နင့်။
ဒါကြောင့်လည်း အနောက်ကတောင် တကူးတက လာကြတာ ဖြစ်မည်။ ကျမတို့ ဘားဆိုင် တစ်ဆိုင်ပြီးတစ်ဆိုင်က ကောင်မလေးတွေနဲ့ ကောင်လေးတွေကို ဖြတ်ကျော်လာသည်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့ ရောက်တော့ နန်စီရဲ့ အခါလွယ်အိတ်ကို စကတ်တိုတို ကောင်မလေးက သတိထားမိပုံရသည်။ အခါ စကားနှင့် "ဟလို" ဟု လှမ်းနှုတ်ဆက်သည်။ နန်စီက အခါစကားနှင့် ပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်တော့ အားလုံး ကြက်သေသေ သွားကြသည်။ ဒီနေရာမှာ အခါစကား ဘယ်သူပြောတတ်မှာမို့လဲ။
နန်စီကတော့ ကြောက်ရွံ့မှု မနှစ်မြို့မှုမပြ။ နွေးထွေးကြင်နာမှုတွေ အပြည့်နှင့် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ စကားပြောနေသည်။ သူတို့လေးတွေဆီမှ အပြုံးက သမီးဆီလည်း ကူးဆက်သွားပြီ။ ကျမသမီးလေးလည်ပင်းမှ ဆွဲကြိုးလေး ကိုင်ကြည့်ကြရင်း "ညီမလေးက အရုပ်ကလေးလိုပဲနော်" ဟု နန်စီကတဆင့် ပြောနေသည်။
ဒီမြင်ကွင်းကြောင့် အော်ဟစ် ဆဲဆိုပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေကို မနည်းအောင့်ထား မျိုသိပ်ထားလိုက်ရတော့ မျက်ရည်တွေ အလိုလို ကျမပါးပြင်ပေါ် စီးကျလာသည်။ ဘာကြောင့် ကလေးတွေကို တကူးတက လာဖျက်ဆီးနေကြတာလဲ။ သမီးကတော့ ကျမလက်ကို ကျစ်ကျစ်ဆုပ်ရင်း အရာရာကို တိတ်ဆိတ်စွာ ငေးကြည့်ပြီး ဖြစ်ရပ်ကားချပ်တစ်ခုလုံး အနက်ကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်ပုံမရ။
သို့သော် ဆင်းရဲတွင်းတွင် မွေးဖွားသူများ၊ ဆေးစွဲနေသူရဲ့ သားသမီးများအတွက်တော့ ကံကြမ္မာက ခြားနားလှသည်။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းမှရတဲ့ ငွေကြေးက သူတို့ကို သွေးဆောင်ထားသည်။ ထမင်းတစ်ပန်းကန်၊ ပေါင်မုံတစ်ဖဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ် ရင်းရတော့မည့် ကလေးငယ်တွေက သိန်းသောင်းချီနေသည်။
ခဏကြာတော့ ဟိုတယ်ခန်းဆီ ကျမတို့ ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ကီယာစတင်က အမေရိကရှိ အိမ်ကို ဖုန်းခေါ်သည်။ တွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှ သူ့ဖေဖေကို ဖောက်သည်ချသည်။ သူ့အဖေကို ရင်ဖွင့်လိုက်ရတော့ သမီးလေးမျက်နှာတွင် ဖုံးလွှမ်းနေသည့် ၀မ်းနည်းမှုတွေ လွင့်ပြယ်သွားဟန်ရှိသည်။ ဖုန်းကို လက်နှင့် အသာဖိထားရင်း "မေမေ ပြည့်တန်ဆာလေးတွေအကြောင်း ဖေဖေကို ပြောပြလိုက်ရမလား" ဟု ကျမကို တိုးတိုး လှမ်းမေးသည်။ "ပြန်ရောက်မှာ ပြောပေါ့ သမီးရယ်" လို့ သူ့အဖေ စိုးရိမ်သွားမှာစိုးလို့ နှစ်သိမ့်ထားလိုက်ရသည်။
"မေမေ ဟိုမှာကြည့် ဟိုမှာကြည့်"
နန်စီက ကရင်ရွားသားတွေကို ထိုင်းစကားနှင့် ပြောသည်။ ထိုင်းစကားက နယ်စပ် ကရင်လူမျိုးစုများအဖို့ ဒုတိယ ဘာသာစကားလေ။ "ဆင်တစ်ကောင်ငှားစီးရင် ၁၅၀ဘတ်" လို့ ကျမတို့ကို လှမ်းပြောသည်။ သမီး ကီယာစတင်က ဆင်စီးဖို့ သူ့ဟာသူ တိတ်တိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသား။ ဒီလိုနှင့် ကျမတို့ ဆင်ပေါ်ကို ကြိုးသစ်သား လှေခါးအတိုင်း တက်လိုက်ကြသည်။ ဆင်စီးရသည်မှာ အထာမကျလှ။
ကီယာစတင်ကတော့ တခစ်ခစ်နှင့် "ဘောလုံးကြီး စီးနေသလိုပဲ မေမေ" တဲ့။
ကရင်ကျေးရွာ လမ်းကြားကလေးကို ဖြတ်သွားစဉ် ကြက်တွေ ခွေးတွေက ဟိုပြေးဒီပြေးနှင့်။ ကျမ အပေါ်စီးကနေ ရွာတဲအများစုကို လှမ်းမြင်နေရပြီး၊ ထမင်းချက်၊ အင်္ကျီချုပ်၊ သန်းတုတ် နေကြသည်။ ကီယာစတင်ကတော့ စူးစူးစိုက်စိုက် လိုက်ကြည့်နေသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိတာ၊ အီမ်သာတွေ မရှိတာကို သတိပြုမိပါ့မလား။ ကျမတို့ ကော်လိုရာဒိုက အိမ်နဲ့ ဘယ်လောက်ကွာခြားသလဲ။ ကောက်ရိုးနဲ့ သက်ကယ် အိမ်နံရံတွေ၊ ညစ်ပတ်တဲ့ ကြမ်းပြင်တွေက သမီးကို ရှော့ဖြစ်စေသလား။ သူ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမှမပြောဘဲ အတွေးနက်နေသည်။
ကျမတို့ မြို့အပြန်က ညဉ့်နက်ပြီး၊ မော်တော်ဘုတ်ပေါ်မှာတော့ ချမ်းစိမ့်နေသည်။အနွေးထည်တွေ ယူလာမိတာ ကံကောင်းသည်။ ဇီယွန်နှင့် ဆေးလ်ကတော့ မော်တော်ထွက်ပြီး မကြာခင် အိပ်ပျော်သွားပြီ။ နန်စီနှင့် ကျမတို့ ကလေးတွအနား နီးနီးကပ်ကပ် နေကြရင်း ဘာရယ်မသိ ပြုံးမိကြသည်။ ကျမစိတ်တွေက ရွာမြင်ကွင်းလေးထဲက မထွက်တော့။ ရွာက ကလေးတွေကို ဘယ်လို ပညာတတ် လူလားမြောက်အောင် ပျိုးထောင်ကြပါ့မလဲ။
"နယ်စပ်ဖြတ်လာရတာ တစ်တစ်ခါ သိပ်လုံခြုံတာ မဟုတ်ဘူး၊ ကရင်နဲ့ ဗမာစစ်တပ်တွေအကြား မကြာခဏ တိုက်ပွဲတွေ ပစ်တတ်ခတ်တတ်တာတွေ ရှိတယ်။ ဗမာစစ်တပ်က ရွာလုံးကျွတ် ရှင်းပစ်တာတွေလည်း ရှိတယ်" ဟု နန်စီက ပြောပြသည်။
"မျက်လုံးကို ရှေ့တည့်တည့်ပဲကြည့်၊ ကိုယ်သွားမယ့်နေရာ ကိုယ်သိနေတဲ့ပုံနဲ့နေ၊ ဘယ်သူကိုမှ စကားမပြောမိစေနဲ့" လို့ နန်စီက နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တံတား အကူးတွင် ကပ်မှာထားသည်။ သို့သော် ကျမမျက်လုံးက ရှေ့တည့်တည့် မကြည့်နိုင်အားပါ။ ပိန်ပိန်သေးသေး ညစ်ပတ်ပေရေနေတဲ့ ကလေးဒါဇင်ကျော်က တံတားကူးကတည်းက လိုက်လံတောင်းရမ်းနေသည်။
"အပြန်ကျမှ ပိုက်ဆံပေး၊ အခုပေးလိုက်ရင် တကောက်ကောက် လိုက်နေကြတော့မှာ" လို့ နန်စီက ပြောသည်။ ခက်တာက ခြောက်နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်က ကျမတို့နောက် တတွတ်တွတ်ပြောရင်း ထပ်ကြပ်လိုက်လာသည်။ လည်ပင်းကလည်း စောင်းငန်းငန်းနှင့်။ မြင်ကွင်းကို ကျမ မခံစားနိုင်တော့ပါ။ သမီး ကီယာစတင် မျက်နှာတွင်လည်း စိုးရိမ်ထ်ိတ်လန့်ပြီး ကျမလက်ကို ကျစ်ကျစ် ဆုပ်ထားသည်။ နန်စီ မျက်နှာ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်း ငိုတော့မည့်ပုံ။
"ကျမတို့ တတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာ ဒီလို ကလေးတွေ အများကြီးမှ အများကြီး" နန်စီက ကြိုးစား ရှင်းပြသည်။
နေ့လည်စာ စားသောက်ပြီးချိန်မှာ လူငယ်တွေက ကုလားထိုင်များ တန်းစီလျက် နှစ်တန်းခွဲလိုက်သည်။ အခါ ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ချက် တေးသီးချင်းများနှင့် ဆိုကြ ကကြ။ နန်စီက ကျမတို့ကို ဘာသာပြန်ပြတာတွေလည်း ရှိသည်။ အားလုံး မျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ အတိုင်းသား။
"မေမေ သူတို့မှာ ဘာမှ ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်ပျော်ရွှင်ကြတယ်" ထိုင်းဖက်အပြန် တံတားကူးစဉ် ကီယာစတင်က ပြောသည်။ သိပ်ပျော်ရွှင်ကြတယ် ဆိုပါလား။ အခါတွေမှာ ခေါင်းပေါ်မှာ အမိုးကလွဲလို့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ များများစားစား မရှိ။ သမီးအတွက် သင်ခန်းစာကောင်းတစ်ခုနှင့် စဉ်းစားစရာတွေ ရသွားသည်။
နောက်တစ်ပတ်တွင် နန်စီက ကားနှင့် ကျမတို့ကို မောင်းခေါ်သွားပြီး 'အာရှ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကလေးပြည့်တန်ဆာ ပပျောက်ရေး' (ECPAT) အဖွဲ့မှ ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ခံဒါရိုက်တာ ထိုင်းအမျိုးသမီး ကူစူမယ်လ် ရချဝေါင် နှင့်တွေ့ဆုံစေသည်။
အသက် ၃၅နှစ်ခန့်ရှိ ကူစူမယ်လ် က သူမ အလုပ်ကို စွဲစွဲလန်းလန်း အရူးအမူး လုပ်နေသူမို့ ကျမ သဘောကျသည်။ လ္ဘက်ရည်နှင့် ဧည့်ခံပြီး ထိုင်စကား ပြောဖြစ်ကြသည်။ ကီယာစတင်ကိုတော့ မကြားဝံ့မနာသာတွေ မကြားစေချင်လို့ စာအုပ်တွေနှင့် ခပ်ဝေးဝေးမှာ ထားရသည်။
"တရားဝင် ရီပို့တ် အရတော့ ထိုင်းမှာ ပြည့်တန်ဆာ အရည်အတွက် ကျဆင်းသွားပြီလို့ တင်ပြကြတာပေါ့နော်။ ဒါ မမှန်ပါဘူး။ ရုံတွေကို ပိတ်ပစ်လိုက်တော့ မြေအောက်လုပ်ငန်း ပိုဖြစ်ကုန်တယ်။ မိန်းကလေးတွေကို ကာရာအိုကေ၊ ဘားတွေ၊ ဟိုတယ်တွေနဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေမှာ ရှာလို့ရတယ်" ဟု ကူစူမယ်လ် က ရှင်းပြသည်။
"အေဒ့်စ် ရောဂါက အမြဲကြောက်မယ်ဖွယ် အခြေအနေပါ။ ထိုင်းမှာ HIV/AIDS နဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်နေတဲ့ အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကလေး ၂၄၀၀၀ ရှိတယ်။ ကလေးလိင်အလုပ်သမ အများစုကိုလည်း အေဒ့်စ် ရောဂါ ရှိမရှိ စမ်းသပ်တာ မရှိသေးဘူး။ သူတို့ ငယ်ငယ်နဲ့ သေသွားမှာ ကျမ စိတ်ပူနေတယ်" လို့ ရှင်းပြသည်။
"ခေါင်းတစ်ယောက်က ဖောက်သည်တွေ ရွေးချယ်ဖို့ ဟိုတယ်မှာ ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွေ ပေးထားမယ်။ ပြီး မိန်းကလေးတွေက သူ လွှတ်တဲ့ နေရာ သွားရတာပဲ" ဟု ကူစူမယ်လ် ကပြောသည်။
ထိုင်း လိင်ကုန်ကူးမှု လုပ်ငန်းမှာ အမေရိက၊ ဩစတြေးလျ၊ ဗြိတိန်နှင့် အာရှမှ အမျိုးသားများအတွက် ကျော်ကြားပြီး၊ ဖွံဖြိုးပြီး နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ လိင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံကို လာကြသည်။ ဒါကြောင့်ပင် ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းက ကောင်းနေပြီး၊ အဆိုးသံသရာကို ဖောက်ထွက်ဖို့ ခက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
"ကလေးတွေကို ဘယ်နေရာမှာထားလဲ ဆိုတာ မသိရင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ဖို့ ခက်ပတယ်။ ကလေးတွေက ကာရာအိုကေဆိုင်မှာ၊ ဘားမှာ၊ အနှိပ်ခန်းမှာ၊ ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အ၀ှက်ခံထားရတယ်" ဟု ပြောပြသည်။
ကျမ ကီယာစတင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ စာအုပ်လှန်နေသည်။ ကျမတို့ပြောနေတာ တစွန်းတစတော့ ကြားမှာပဲ။ ဒီခရီးကြမ်းအတွက် သမီးလေးရဲ့ ရင့်ကျက်မှုက လုံလောက်ပါရဲ့လား။ ကျမတို့ နောက်ထပ် စကားပြောနေစဉ် ကီယာစတင်က ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်မှ ကယ်တင်ထားခံရသည့် ကလေးများနှင့် စကားပြော ဆော့ကစားနေသည်။ ထိုကလေးတွေက လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုမျိုးစုံခံခဲ့ရသူလေးတွေ။ သူတို့ စိတ်ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေကို ကုစားပေးနေကြရသည်။ လ်ိင်ကုန်ကူးမှုက ရိုးသားအပြစ်ကင်းစင်သူများအတွက် ကြောက်လန့်စရာ အမာရွတ်တွေ ချန်ထားခဲ့သည်။
"တကယ့် အမှန်တရားကတော့ ကျမတို့ မတတ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့။ ငွေပါ။ လူတွေက အလွန်အမင်း ဆင်းရဲကြတယ်။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းက ငွေကောင်းကောင်း ရနိုင်တယ်လေ" ဟု ကူစူမယ်လ်က အဆုံးသတ် ပြောလိုက်သည်။
မိန်းကလေးငယ်တွေ ဒီနေရာတွင် လာရောက် နေထိုင်သည်မှာ နောက်ခံအကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့ကျတော့ ဖအေဘိန်းစွဲနေသူက သူ့ဆေးဖိုးအတွက် သမီးကို ပြည့်တန်ဆာလုပ်ဖို့ ရောင်းစားလို့ ကယ်တင်ထားရတာမျိုး ဖြစ်သည်။ တချို့ကလည်း မိဘတွေ အေဒ့်စ်ရောဂါနှင့် ဆုံးပါးသွားပြီး ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက လိင်ကုန်ကူး ရောင်းချထားခြင်း ဖြစ်သည်။
နန်စီက အသက် ၁၂နှစ် အရွယ် မိန်းကလေးကို လက်ညှိုးထိုးပြရင်း "ကျမတို့ အိမ် လူတွေပြည့်နေတဲ့အချိန် သူ ရောက်လာတာပေါ့။ သူ့မိဘတွေ အေဒ့်စ်နဲ့ ဆုံးကုန်လို့ သူ့ဦးလေးက ဒီခေါ်လာတာပါ။ သူဦးလေးကလည်း မွေးထားချင်စိတ်မရှိဘူး။ သူဦးလေးနောက်မှာ ကောင်မလေးက တအီအီနဲ့ ငိုလို့။ ကျမ အရည်ပျော်သွားတယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ကျမ ခေါ်ထားရမှာပေါ့"
ချစ်စရာ မိန်းကလေးတစ်ဦးက ကလေးငယ်နှစ်ယောက် လက်ဆွဲပြီး အခန်းထဲဝင်လာသည်။ "သူ့နာမည် အေဂေါ လို့ခေါ်တယ၊် ကျမတို့ လုပ်ငန်းကို အဓိက ကူညီသူပေါ့" ဟု နန်စီက မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အေဂေါက လဘက်ရည်ဖျော်တိုက်ရင်း သူမဘ၀ကို ပြောပြသည်။
"ကျမ ၁၄ နှစ်သမီးမှာပေါ့။ တစ်နေ့ အပြင်ကအိမ်ပြန်လာတော့ ၁၆နှစ်ရှိတဲ့ ကျမ အစ်မ မူခ်ဒ ပျောက်နေတာ သိသွားတယ်။ အစ်မ အိမ်က ဘာကြောင့် ထွက်သွားတယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှ မပြောကြဘူး။ အမေ့မျက်နှာမှာတော့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတာပေါ့"
ဓနောက်တော့မှ ကျမ သိသွားတယ်။ ဘိန်းစွဲနေတဲ့ ကျမ အဖေက အစ်မကို ပြည့်တန်ဆာလာဝယ်သူတွေကို ရောင်းပစ်လိုက်တာတဲ့။ နောက် ငါးနှစ်လောက်ကြာတော့ အစ်မလည်း အေဒ့်စ် ရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားပါတယ်။ အစ်မကို ရောင်းပြီးတာနဲ့ အမေက ကျမကိုထပ်ရောင်းမှာစိုးလို့ ဒီမိန်းကလေး ဂေဟာဆီ လာပို့တာ။ အိမ်ကနေ ထွက်လာတာ အဖေတောင် မသိလိုက်ဘူး"
"ဒီမှာ အားလုံးက ဂရုစိုက်ဖို့ လိုနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကြီးပဲ။ အခါလူမျိုးတွေဟာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာနဲ့ နေထိုင်နေကြရတာ။ အစ်မလည်း ကြားမှာပေါ့ စိတ်ပျက်ညီးညူသံတွေ၊ အချို့က ပြည့်တန်ဆာ ရောင်းစားခံရတာ၊ တချို့က အေ့ဒ်စ်ကြောင့် သေကြတာတွေ။ ဒီကိုရောက်လာတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ သူတို့ ငယ်ရွယ်နုနယ်မှု ပြန်ရကြတယ်။ နောက်ဘယ်တော့မှ ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် မျှော်လင့်ချက် ရနိုင်တယ်လေ"
နောက်ထပ် ညဘက်တွေ ထွက်ကြည့်လိုက်ရင် နာကျင်မှု စက်ဆုတ်ရွံရှာမှုတွေနဲ့ ငိုကြွေးနေမည့် အခြားမိန်းကလေးငယ်ပေါင်း များစွာ ကျန်ရှိနေသေးသည်။ သူတို့ကမ္ဘာလောကရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုကို ဆက်မငိုကြွေးနိုင်တဲ့ မျက်လုံးပေါင်းများစွာလည်း ရှိနေကြဦးမည်။ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ၊ ဘားဆိုင်တွေက မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက် အိပ်မက်တွေကော ကျန်ရှိသေးရဲ့လား။
Written by ၀င့်ထန်း (ဘာသာပြန်သည်)
Posted: 13 Apr 2012 03:13 AM PDT
ဧပြီ လ ၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၁၂
ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီကျော် တွင် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းသည် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာအဖွဲ့များနှင့်အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး ယခု အခါ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးနေပြီ ဖြစ်သည်။
Posted: 13 Apr 2012 03:04 AM PDT
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလည်းမူ့ တွေ တကယ်တွေ့ ရပီဆိုရင် ပိတ်ဆို့ မူ့ တွေ လျော့ချ တယ်လို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချူပ် က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ။ ကိုသက် သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ် ။
Posted: 13 Apr 2012 03:15 AM PDT
မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကင်မရွန်တို့တွေ့ဆုံ သည့် သတင်းကို စကိုင်းနယူးသတင်းမှ ထုတ်လွှင့်သွားပါတယ်။ ကင်မရွန်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာ ထွန်းတောက်နေသော မီးပွင့်ပမာ (Bright spark)လို့ စကိုင်းနယူးကိုပြောကြားသွားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted: 12 Apr 2012 06:56 PM PDT
North Korea's long-range ballistic missile broke apart after its launch early Friday, according to the Associated Press. The rocket apparently flew 75 miles before it broke into four pieces and crashed into the sea, off the coast of the Korean peninsula.
News broke around 6:53 p.m. ET Thursday that the rocket, fueled at the launch site in Pyongyang on the country's western coast, had failed -- issuingasevere blow to one of the world's most secretive and belligerent regimes.
On Wednesday's NewsHour, John Isaacs of the Center for Arms Control and Non-Proliferation told Judy Woodruff that North's Korea's new missile was "sophisticated."
"If they can get it to work, it's sophisticated, I think, by definition," he said. "If it could carryawarhead thousands of kilometers, it would be very sophisticated, but that's not easy to do."
Watch North Korea's New Missile: 'It's Sophisticated' on PBS. See more from PBS NewsHour.
Watch Friday's NewsHour broadcast and visit the World page for more coverage on North Korea and its failed missile launch.
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလက်အောက်ရှိ ရန်ကုန်-ဒလ ကူတို့သင်္ဘော
ဆိပ်( ပန်းဆိုးတန်း )တွင် နေစဉ်ခရီးသွား များထံမှ တန်ဆာခများကို ၀န်ထမ်းများမှ မတရားကောက်ခံနေသည်ဟုသိရပါသည်။
လက်မှတ်အရောင်း ဌာနများ ရှိသော်လည်း အ၀င်အ၀ တွင် ၀န်ထမ်း ၂ ဦးခန့်
အမြဲထားရှိပြီး ခရီးသွားပြည်သူတို့ထံမှ သာမန် ခရီဆောင် အိတ်များကိုပင် တန်ဆာခ ဆောင်ခိုင်း နေပါသည် ။
ဒလ-တွံတေး - ကွမ်းခြံကုန်း-ကော့မှုး စသည်ဒေသများမှ ခရီးသွားများသည် ကျေးလက်ဒေသ မှ ခရီးသွားအများဆုံးဖြစ်သည့်အတွက် ၀န်စည်စလှယ်များကို မြွေရေခွံအိတ်များ -ခြင်းများ - တောင်းများဖြင့်သာ သယ်ဆောင်လေ့ရှိကြပါသည် ။
ထို့သို့သယ်ဆောင်လာသော အိတ်မည်သည့်အရွယ်အစားကိုမဆို တန်စာခ အတင်းအကြပ်ကောက်ခံနေသည့်အပြင် ကောက်ခံသူဝန်ထမ်းမှာလည်း ဆက်ဆံရေးမပြေပြစ် ပဲ ဟိန်းဟောက်ခြောက်လှန့်ကာ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများထံမှ သတ်မှတ်နှုန်းထားများ၊ ပြေစာဖြတ်ပိုင်းများ မရှိပဲ ပြေစာလွတ်ကောက်ခံနေသည်ဟုသိရပါသည် ။
ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်-ဒလ ကူးတို့သင်္ဘောဆိပ်ရှိဝန်ထမ်းများအား လိုအပ်သလိုစုံစမ်း စီစစ်ကြီးကြပ် ပေးရန်လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရသည် ။
Photo-Yangon Press International,The Voice Weekly,7Day News Journal
Posted: 12 Apr 2012 03:32 PM PDT
ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းရှိ IC မဏ္ဍပ်ကို ၀င်ကြေး ၅၀၀ ကျပ် ဖြင့် ဖျော်ဖြေတင် ဆက်ရာ ၀င် ရောက်ကြည့်ရှုသူများအထူးစည်ကားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ၄င်း IC မဏ္ဍပ်အား Grand Royal မှ ပံ့ပိုးပေးထားပြီး လေးဖြူ၊ အငဲ၊မျိုးကြီး၊၀ိုင်းဝိုင်း စသည့် IC ၏ပင်တိုင်အဆိုတော်များနှင့် အခြားအဆိုတော်များစွာ သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြောင်း ၊ အခြားဖျော်ဖြေရေး မဏ္ဍပ် များစွာလည်းရှိကြောင်းသိရသည်။ IC မဏ္ဍပ်အား သင်္ကြန်အကျနေ့မှ အတက်နေ့အထိနေ့စဉ် နံနက် ၁၁ နာရီမှ ၂ နာရီထိတစ်ကြိမ်၊ ညနေ ၃ နာရီမှ ၆ နာရီထိတစ်ကြိမ်၊ တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ် ကျဖျော်ဖြေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Posted: 12 Apr 2012 03:27 PM PDT
သင်္ကြန်အကြို မန္တလေးမြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ် ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပစဉ် ညနေ ၆ နာရီခန့်၌ လေပြင်းများ တိုက်ခတ်၍ပိရိသတ်ပွဲကြည့်စင်မှ ကြေငြာဗီနိုင်းများ ပြုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်။
ထိုသို့ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် မြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ်ရှိ ဗီနိုင်းအချို့အပြင် တခြားမဏ္ဍပ်အချို့မှ ကြောငြာဗီနိုင်းများလည်း စုတ်ပြဲသွားခဲ့သည်။လေပြင်းတိုက်ပြီးနောက် မိုးဖွဲလေးများ ရွာသွန်းခဲ့သည်။
မဏ္ဍပ်ဖွင့်ပွဲတွင် မန်းမြို့တော်ဝန်ဦးအောင်မောင်းက မြို့ခံလူထုအားနှစ်သစ်ကူး နုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားရာ၌ ကမ္ဘာကြီးရာသီဥတုပူနွေးလာမှု နှင့် ဖောက်ပြန်မှု များအကြောင်းကို ထည်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး မြို့နေလူထုအနေဖြင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ကို အလေးထားရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
မန်းမြို့တော်ဝန် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဖွင့်ပွဲကို ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
Posted: 12 Apr 2012 02:50 PM PDT
"ကျမ်းကျိန်တဲ့ဟာ ဇယား လေး လို့ သူတို့ ပြောတယ်လေ။ အဲဒီ ဇယား လေး ထဲမှာ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး ပါတယ်။ ကျနော်တို့ က ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတဲ့ ဟာကို ကျနော်တို့ အရင် ကတည်း က လက်မခံဘူးလေ။ ကျနော်တို့ မူအရ။ ကျနော် တို့ က လေးစား လိုက်နာမယ်။ အဲဒီ ဟာကို ပြင်ဆင်ရေး အတွက် အန်ကယ်တို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ အချိန် ကျနော်တို့ တက်မယ်။ အခု အခြေအနေ အရ ပြောရရင်တော့ ၂၃ ရက်နေ့ မှီဖို့တော့ နည်းနည်း ခဲယဉ်းတာပေ့ါလေ။ ဒါ ကျနော်တို့ အတိအကျ မပြောနိုင်ဘူး။"
"အဲဒါတော့ ကျနော် ပြောလို့ မရပါဘူး။ ကျနော်တို့ အကြံပြုချက်တွေ ပေးပို့ထားတာ ရှိပါတယ်။"
"ကျနော်တို့ ကျမ်း မကျိန်ဘူးပေ့ါ။ အန်အယ်လ်ဒီ က မတက်ဘူး။ ကျမ်းကျိန်မှ တက်မှာ။ ကျမ်းမကျိန်ရင် တက်လို့ မရဘူး။ ကျမ်းမကျိန်ရင် ဧည့်သည် ဖြစ်နေမှာပေ့ါ။ ကျနော်တို့ အဲဒီ ဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြေလည် သွားလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ အကြံပြုချက်ထဲ က တခုခုနဲ့ ပြေလည်သွား လိမ့်မယ် လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ထားတယ်။"
"ဒီကိစ္စလည်း ဆွေးနွေးတဲ့ အထဲမှာ ပါတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ကျန်တာတော့ ဆွေးနွေးတာတွေ subject တွေ အများကြီး၊ ကျနော်တော့ မသိဘူး။"
"ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုတဲ့ အခါမှာ သုံးတဲ့ စကားလုံးက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ် လို့ဘဲ ပြောပြော လေးစား လိုက်နာတယ် လို့ဘဲ ပြောပြော ကျနော်ကတော့ အတူတူဘဲ သက်ရောက်မှု လည်း ရှိတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ လေးစား လိုက်နာတယ် ဆိုတော့ လေးစားတယ် ဆိုတော့ Pay respect ပေါ့။ လိုက်နာတယ် ဆိုတော့ to comply ပေါ့ဗျာ။ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာတော့ safeguard ပေ့ါဗျာ။ ကာကွယ် စောင့်ရှောက် တာလည်း အခြေခံ ဥပဒေ အရ ဖြစ်လာတဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲ အရဖြစ်လာတဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တွေ ဟာ အခြေခံ ဥပေဒအရ လုပ်ရမယ် ကိုင်ရမယ့် ဟာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အခြေခံ ဥပေဒ အရ ပြင်ဆင်ခွင့်ကိုလည်း အခြေခံ ဥပဒေထဲမှာ သွားတွေ့တယ်။ ဒီဟာတွေက ကျနော် ထင်တာတော့ လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှ လိုအပ်တဲ့ ဟာတွေ ကို ဆက်လက် ကျင့်သုံးသင့်တယ် ထင်တယ်။ ဒီ အဝင်မှာ အဲဒီ ကိစ္စတွေ ကို၊ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေ ကို သိပ်ပြီးတော့ တွယ်ကပ်နေပြီးတော့ ကြိုးစားနေမယ် ဆိုလို ရှိရင် အစ မကောင်းဘူး ဖြစ်သွားမှာ ကို ကျနော် က စိုးရိမ်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော် တို့က ဒီလွှတ်တော် ထဲ ကို ဒီ အင်အားစု တွေကို မြန်မြန် ရောက်စေချင်တယ်။"
"လုံးဝ မထင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ လုံးဝ မထင်ပါဘူး။ အခုကို က အခြေခံ ဥပဒေထဲ က တချို့ အပိုဒ် တွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ က လွှတ်တော် အမတ်တွေ ကကော၊ ပါတီ မရွေး၊ လူမျိုး မရွေး ကြိုးစားနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါလည်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တာ တမျိုးပါဘဲ။ အခြေခံ ဥပဒေတွေ ကို ပိုပြီးတော့ ကောင်းလာအောင် ပြည်သူတွေ အတွက် ပိုပြီးတော့ အကျိုးရှိ လာအောင် ပြင်ဆင်တာ ဟာလည်း အခြေခံ ဥပဒေ ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တာပါဘဲ။ တနည်းအားဖြင့် အခြေခံ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာတာဘဲ လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။"
By သင်းသီရိ ( ဗွီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း)
You are subscribed to email updates from သစ်ထူးလွင် Myanmar News Now